Intamo e-scapular iyinto yokuhamba ebalulekile yomzimba womuntu. Asikwazi ukusebenza nokuphumula ngaphandle kwawo nsuku zonke. Njengenye yamajoyinti abalulekile omzimba womuntu, ihlombe lihamba cishe sonke isikhathi. Impilo yayo inquma ngqo ikhwalithi yempilo nekhwalithi yempilo yomuntu. Usebenzisa iSho enhle ...
Ekwindla yisikhathi esihle sokuvuna. Futhi yisikhathi sezifo esiphezulu sezifo. Izifo eziningi zivame ukubuyela emuva ekwindla. Ngokusho kwezazi zokusebenza kwengqondo, ngenxa yethonya lesimo sezulu nezinye izinto, izehlakalo zokudangala nezinye izifo zengqondo ekwindla zikhule kakhulu. T ...
Kungani indololwane yakho ingakhululekile?
Abangani abathanda ukudlala ithenisi, i-badminton ne-table tennis bazolimaza izindololwane uma bedlala ibhola, ikakhulukazi uma bedlala i-backhand. Ochwepheshe basitshela ukuthi lokhu kuvame ukubizwa ngokuthi "indololwane yethenisi". Futhi le ndololwane yethenisi ikakhulukazi ngesikhathi sokushaya ibhola, isihlanganisi sesihlaka asisi b ...
Enkambisweni yokuqina, kulula ngathi ukudala ubunzima bemisipha nobunzima be-tendon ngenxa ye-overexertion. Lapho ubunzima be-muscle kanye ne-tendon kwenzeka, sizozwa ubuhlungu. Yize ukuzivocavoca kuyilungele impilo yethu, kusho ukuzivocavoca okufanele. Uma singathathi izinyathelo ezifanele zokuphepha ...
Ngenkathi eshintshanayo yasekwindla nasebusika minyaka yonke, isimo sezulu esomile, yizinga eliphezulu lezingozi zomlilo. Kulula ukubhebhethekisa umlilo futhi kusongela ukuphepha kwezimpilo zabantu nempahla yabo. NgoFebhuwari 20, sahlela abasebenzi bethu ukuthi baqeqeshe ulwazi ngomlilo. F ...
Mayelana nokuvikelwa okhalweni
Ukuvikelwa okhalweni kudlala indima ebaluleke kakhulu ekugwemeni ukulimala kwezemidlalo nokwenza ngcono ukusebenza kwezemidlalo. Ukhalo, njengephuzu elibalulekile lezemidlalo eminingi, lifanelwe ukunakwa. Ekuzivocavoca umzimba nasezemidlalo, okhalweni kubhekwe namandla adonsela phansi amakhulu, futhi kuyabandakanyeka kulayini ...
Indima yomcamelo wentamo nokuthi ungabuqeda kanjani ubuhlungu bentamo
Abasebenzi besimanjemanje abanekhola emhlophe bagcina amakhanda abo phansi isikhathi eside, okuzokwenza ukuthi imisipha engemuva kwentamo ikhathale ngokweqile, futhi kuzocindezela wonke amandla adonsela phansi emathanjeni omgogodla womlomo wesibeletho. Ngemuva kwesikhathi eside, kuzodala ukuthi i-disc ye-vertebrae yomlomo wesibeletho iphume, kubangele ...
Izici eziyi-7 zokuvikela okhalweni lwabesifazane
Ukuxhaswa kweLumbar kuya ngokwanda kubantu besifazane abahleli phansi, ngoba abesifazane abanokuya esikhathini, ukukhulelwa, ukubeletha, ukuncelisa ibele nezinye izici zomzimba, futhi banezici zezifo zabesifazane, ngakho-ke ubuhlungu obuphansi emuva yizimpawu ezivamile. Ngakho-ke singakuvikela kanjani okhalweni lwethu ...
Abanye abantu bacabanga ukuthi ukuzivocavoca ekuseni kufanele kwenziwe kusenesikhathi, ngakho-ke bathanda ukuphuma bayozivocavoca ngaphambi kokuntwela kokusa. Eqinisweni, akuyona yesayensi. Ngemuva kobusuku, ukungcola kunqwabelana kakhulu emoyeni, ukuphefumula lo moya ongcolile kuzoba nomthelela omubi emzimbeni womuntu.
Imidlalo enengqondo ebusika
Emphakathini wanamuhla, ijubane lempilo nomsebenzi liyashesha kakhulu, futhi umzimba womuntu usesimweni sokugcwala ngokweqile isikhathi eside. Njengoba isisho sithi, "Impilo ilele ekusebenzeni." Imidlalo efanele ibamba iqhaza elihle ekukhuthazeni impilo yabantu, kanti nemidlalo yasebusika nayo ingasebenzisa amandla abantu ...
Sebenzisa unogada wesihlakala ofanele
Isihlakala yingxenye esebenzayo kakhulu yomzimba wethu, ngakho-ke ithuba lokulimala liphakeme kakhulu. Ukugqoka ama-Bracers kungayivikela ekukhubazekeni noma ekutholeni ngokushesha. I-Wrist Brace ibe enye yezinto ezibalulekile kubantu bezemidlalo futhi isihlakala sesandla kufanele singaphazamisi ukusebenza okujwayelekile kwe ...
Vikela amadolo akho lapho wenza ezemidlalo
Kwezemidlalo yesimanje, ukusetshenziswa kwe-kneecap kukhulu kakhulu. Amadolo akuyona ingxenye ebaluleke kakhulu kwezemidlalo, kodwa futhi yingxenye esengozini kakhulu. Kubuye kube yingxenye yokululama ebuhlungu kakhulu futhi ehamba kancane uma ulimele, futhi ngisho nabanye abantu bayoba nobuhlungu obuzothile ezinsukwini zemvula nezamafu. Ezemidlalo amadolo B ...